राखेपका १५ कर्मचारी तथा प्रशिक्षकद्धारा राजीनामा - Khelpati
मगलवार, असार २३, २०७७ हिम बिक्रम केसी
काठमाडाै‌ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का १५ जना कर्मचारी तथा प्रशिक्षकले राष्ट्रिय खेलकुद संघबाट राजीनामा दिएका छन् ।
खेलकुद ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसंगै सोमबारसम्म १५ जना कर्मचारी र प्रशिक्षकले विभिन्न राष्ट्रिय संघबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
परिषद्का संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले केन्द्र सहित जिल्लाभरका करिब २ सय कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलाई नयाा ऐनले प्रभावित बनाउने खेलपाटीलाई बताए ।
‘ऐन कार्यान्वयनमा आएसंगै राजीनामा बुझाउने काम सुरु भएको छ । देशभरका करिब २ सय बढी कर्मचारी तथा प्रशिक्षक यसबाट प्रभावित बन्नेछन् ।’ उनले भने ।
राष्ट्रिय खेलकुद संघलाई चलायमान बनाउन सुरुवाती चरणमै परिषद्लेनै कर्मचारीलाई विभिन्न संघमा पठाउने गरेको थियो । त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रिय संघले खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने भन्दै परिषद्का कर्मचारीलाई समावेश गर्दै संघ दर्ता गरेका छन् ।
परिषद्कै कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघमा आबद्ध हुादा खेलाडी तथा संघका गतिविधि प्रभावित हुने देखिएपछि ऐनले नयाा ब्यवस्था गरेको हो ।
आईटिएफ तेक्वान्दोको रक्तदान
सदस्य सचिवको अधिकार कर्मचारीमा मात्र प्रत्यायोजन
खेलकुदका नेताबाट कोरोनालाई चुनौती !
कम्तिमा तीन समूह बनाएर प्रशिक्षण !
आईपीएलको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रोटोकल तयार
साञ्चेज स्थायी रुपमा ईन्टरमा
सिटीमा बर्नेमाउथका डिफेन्डर